Maxaa la sameeyaa haddii ilmuhu ku xanuunsado bruxism | Bezzia
Maxaa la sameeyaa haddii ilmuhu ka xanuunsado bruxism
Maria Jose Roldan | 25/09/2021 11:06 | La cusbooneysiiyay 25/09/2021 11:09 | Hooyooyinka
Haddii aad ogaatay in ilmahaagu ilkaha iska cadayo markuu hurdo, waxaa suurtogal ah inaad ku xanuunsato cillad la yiraahdo bruxism. Waa cudur caadi ka ah intaad malayn karto, oo saamaynaysa rubuc ka mid ah bulshada. Marka hore looma baahna in la walwalo, maadaama bruxism -ku caadi ahaan baaba'aa isla marka ilmuhu la soo baxo ilko joogto ah.
Maqaalka soo socda ayaan wax badan kaaga sheegi doonaa bruxism iyo waa maxay cawaaqibka ay ku yeelan karto caafimaadka afka ee ilmaha.
1 Waa maxay bruxism?
2 Sababaha caadiga ah ee bruxism
3 Sida loo daaweeyo bruxism
Waa maxay bruxism?
Bruxism waa cudur saameeya muruqyada afka oo uu aad ugu foosha yahay, keenaya buuq weyn oo shiidi. Bruxism -ku wuxuu sababi karaa madax -xanuun, daan, ama dheg xanuun. Waxaa jira laba nooc ama nooc bruxism:
Loo yaqaan centric, kaas oo ka kooban ilkaha oo aad uga adag sidii caadiga ahayd. Waxay dhici kartaa maalintii iyo habeenkii labadaba.
Xagjirnimadu waxay sababtaa ilkaha oo la shiido waxayna badanaa dhacdaa habeenkii.
Waa in la ogaadaa in bruxism -ku uu yahay mid caadi ah oo caadi ah inta ilkuhu samaynayaan. Sida caadiga ah, Cilladaan caadi ahaan way baaba'daa ka dib ilkaha joogtada ah ee ilmaha.
Sababaha caadiga ah ee bruxism
Bruxism -ka waxaa sababi kara jir ahaan ama nafsi ahaan.
Haddii ay dhacdo in ay sabab u tahay sababo nafsaani ah, bruxism ayaa soo baxaysa sababtuna tahay culayska xad -dhaafka ah ee nolosha ilmaha ama xaalad walaac oo aad u weyn awgeed.
Sababaha ayaa sidoo kale noqon kara mid jirka ah, sida muuqaalka ilkaha cusub ama booskooda oo liita. Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin inay ilkaha cadaadin karaan marka ilmuhu hurdo.
Sida loo daaweeyo bruxism
Sidaan horeba uga faalloonnay, inta badan kiisaska, bruxism -ku caadi ahaan wuu iska tagaa. Daaweyntu waxay ansax tahay oo kaliya haddii aysan dhicin oo ay ku keento daal aad u daran ilkaha ama xanuun daran.
Haddii ilmuhu aad u yar yahay, si fudud ku rid saxan caag ah aagga sare sidaasna uga ilaali ilkaha inay yeeshaan daal aad u daran. Haddii sanado badan, bruxism uusan baaba'ayn, waxaa lagama maarmaan noqon lahayd in la bilaabo daaweynta ilkaha ama lafaha.
Haddii ay soo baxdo in bruxism -ku ay sababto sababo nafsi ah, waxaa habboon in ilmaha loo isticmaalo tallaabooyin nasasho oo kala duwan si loo yareeyo walbahaarka ama heerarka welwelka intii suurtogal ah. Marka laga hadlayo sababaha jir ahaaneed, waxaa lagu talinayaa in la bilaabo daaweyn ku saleysan fiisiyoterabiga oo gacan ka geysata nasinta muruqyada afka.
Gaaban, ha ka welwelin xad -dhaaf ah haddii ilmahaagu ilkaha iska cadayo markuu hurdo. Waalidiintu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan sida khalkhalka noocaas ahi u soo baxo haddiiba ay wax ka sii daraan. Si loo yareeyo nabaad -guurkaan, waxaa lagu talinayaa in la raaco nidaamyo nasasho oo taxane ah oo ilmaha ka caawiya inuu si deggan u yimaado wakhtiga hurdada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Maxaa la sameeyaa haddii ilmuhu ka xanuunsado bruxism
Ma taqaanaa cudurrada lafaha ugu badan?
Talooyin lagu yareeyo raadadka kaarboonka